PG Sharp Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Salama ry mpanazatra Pokémon, mitady ny fampiharana spoofing farany ve ianao hisamborana Pokémon? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android vao haingana PG Sharp, izay manolotra fiasa manambola tsara indrindra sy fiasa hafa hampitomboana ny laharanao.
Araka ny fantatrao, Pokémon Go dia iray amin'ireo fampiharana lalao Android tsara indrindra, izay amin'ny traikefa filokana tsara indrindra ho an'izay tia Poki. Sarotra kely ny milalao satria tsy maintsy mitady toerana hafa handehananao irery ianao ary hisambotra ireo biby goavam-be any am-paosy. Noho izany, misy fitaovana isan-karazany azo alaina eny an-tsena, izay ahafahanao manana tanana ambony amin'ny mpilalao hafa.
Araka ny fantatrao, ny pocket monsters dia manana mpankafy an'arivony tapitrisa eran'izao tontolo izao ary te hahazo fialamboly tsara indrindra. Noho izany, Pokémon Go no sehatra tsara indrindra hahazoana traikefa mitovy amin'ny mpanazatra monster. Izy io dia manolotra traikefa filalaovana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa, saingy noho ny endri-javatra sarotra sasany. Mitady fomba tsotra hisambotra biby goavam-be tsara ny olona.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahagaga ity, izay ahafahanao milalao ity lalao ity mora foana. Azonao atao ny manao ny sasany amin'ny tetika tsara indrindra amin'ny fampiharana ity, izay hahagaga ny namanao. Misy endri-javatra an-taonina ao amin'ity fampiharana ity, izay azonao idirana. Hizara hevi-dehibe sasantsasany momba izany izahay. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary tadiavo izany alohan'ny hampiasana ity app ity.
Topimaso momba an'i PG Sharp Pokemon Go
Izy io dia rindrambaiko Android, izay manolotra lalao mitovy amin'izany. Fa manolotra fiasa fanampiny fanampiny, izay hampiasan'ny mpilalao lalao mora foana. Manolotra fanararaotana amin'ny lalao izy io, amin'izay ahafahanao mivezivezy mora foana amin'ny toerana samihafa manerana an'izao tontolo izao.
Manolotra fomba maro hivezivezena ho an'ny mpampiasa izy io. Ireo mpampiasa dia afaka miditra amin'ny toerana misy azy ary hanome ny fampahalalana rehetra momba ny rafitra teleportation ihany koa. Pokemon Go Sharp dia hanome ny elanelana misy eo aminao sy ny toerana halehanao kilometatra isan'ora.
The Lalao 3D manome ny fotoana ihany koa, izay hitondra ny avatar anao handeha lavitra. Raha te-hivezivezy lavitra ianao na inona na inona rade, dia azonao atao ny mandefa teleport tsotra ary manidy ny lalao mandra-pahatongan'ny fe-potoana. Io no fomba tsara indrindra hitantanana fotoana.
PgSharp Apk dia manolotra mandeha an-tongotra ihany koa, izay ahafahan'ny avatar anao mandeha mandeha ho azy. Io no dingana tsara indrindra amin'ny dia tsy mila ezaka. Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny fijanonana Pokemon amin'ny fampiasana an'ity dia an-tongotra ity. Tonga hatrany amin'ny fijanonana pokemon samihafa ny avatar anao.
Misy ihany koa ny fikarohana sivana, ahafahanao mitady ny toeran'ireo biby goavambe isan-karazany arakaraka ny sivana. Azonao atao ny manova ny fikarohana ny haavon'ny biby goavam-be, izay ahafahanao mahazo ny fandrindrana ireo biby goavambe araka ny haavo nomena.
Misy endri-javatra mahavariana kokoa taonina ao amin'ity fampiharana ity, izay ahafahanao mankafy milalao ity lalao ity. Azo alaina eto amin'ity pejy ity ny fisintomana PGSharp. Noho izany, azonao atao ny misintona azy amin'ity pejy ity ary mampiasa azy. Raha manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
anarana PG Sharp
Anaran'ny fonosana com.nianticlabs.pokemongo
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 6.1 sy ambony
Ny sasany amin'ireo fiasa dia voalaza ao amin'ny fizarana etsy ambony, fa misy maro hafa. Noho izany, hizara lisitra tsotra iray amin'ireo fiasa fototra izahay rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra.
Mora ny mahita Pokemon
Misorata anarana amin'ny Gmail, Facebook ary ID an'ny Trainer
Sivana hahitana biby goavam-be
Miasa amin'ny fitaovana Root sy No-Root
Raha te haka ity rindranasa ity dia tsy mila mandeha amin'ny toerana hafa ianao. Izahay dia hizara rohy miasa azo antoka sy miasa amin'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Azonao sintonina avy amin'ity pejy ity izany. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Tsindrio ny bokotra fampidinana ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana. Alohan'ny fizotry ny fametrahana dia aza hadino ny manamarina ny 'Source tsy fantatra' avy amin'ny fiarovana ny toerana. Aorian'ilay mari-pamantarana dia afaka mametraka azy eo amin'ny fitaovanao ianao.
PG Sharp no fampiharana Android tsara indrindra ho an'ireo mpankafy Pokemon rehetra. Manome ny endri-javatra tsara indrindra hisamborana pokemon tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary manomboka milalao. Raha mila fampiharana sy fika mahavariana misimisy kokoa dia tsidiho hatrany ny tranokalanay.
Sokajy Apps, Adventure Tags Lalao 3D, PG Sharp, PG Sharp Apk, Mandehana Pokemon goavam-be PG Post Fikarohana
Followers Assistant Pro Apk Download ho an'ny Android 